Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Amy DeLouise | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Amy DeLouise
Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Amy DeLouise
Amy DeLouise (isha: Joseph DiBlasi)
Amy DeLouise waa afhayeen aad loo ixtiraamo oo baahi loo qabo, qoraa, sheekeeye sheeko, iyo agaasime hal abuur leh. Waxaan dhawaan fursad u helay inaan wareysto oo aan ka hadlo shaqadeeda xiisaha badan iyo wejiyada badan leh, anigoo ka bilaabaya bilowgeeda. “Waxyaabihii ugu horreeyay ee aan galo filimka biz wuxuu ahaa shirkad yar oo waxsoosaarka baahinta ah oo ku taal Washington, DC Waxaan soo saareynay shabakad hal saac ah oo TV gaar ah, waxaanan qorayay muuqaalada b-roll, waxaanan la socday dhammaan dib-u-habeynta. Waxaan haysannay hal goob oo kama dambeys ah oo aan ku toogteen qof caan ah oo kaamirada marti gelinaya, laakiin waxay u baahneyd in dib loo qoro, qof walbana wuxuu ku jiray argagax. Qoraha qoraagu wuxuu lahaa oof-wareen. Qof kastaa wuu i soo eegay oo wuxuu igu yidhi 'miyaadan ahayn Ingiriis barta weyn ee Yale? Adiga ayaa qora. ' Markaa sidaas ayaan ku helay deyntii ugu horreysay ee shaashadda. Wax yar ka dib, waxaan bilaabay is-qoris qoris ahaan, laakiin waxaan qaatay shaqooyin badan oo kaaliyayaasha wax soo saarka ah si aan u bixiyo biilasha, oo ay ku jiraan waaxyada goobta ee filimada waaweyn iyo xayeysiisyada badan. Waxaan ka bartay qaar ka mid ah faa'iidooyinka cajiibka ah ee shaqooyinkaas - dadka yaqiinay dhammaan saadka iyo qalabka ay u baahan tahay inay jiido muuqaal gaar ah ama toogasho. Waxaan u maleynayaa casharrada laga soo qaatay riwaayadahaas waxay ahaayeen inaad ubaahantahay inaad udiyaar garowdo inaad fursado qabsato markay isa soo bandhigaan, markastana dadaal adag galiso sidii sixirka shaashadda uga dhici lahaa Sidoo kale, markaad shaqeyneyso 14-saacadood maalmood, runti waxay kaa caawinaysaa inaad dadka quudiso. ”
DeLouise waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah khubarada ugu caansan warshadaha filimada ee ku saabsan sawirrada kaydinta iyo baaritaanka taariikhda taariikhiga ah. Waxaan weydiiyay sidey ugu xiiso gashay dhinacan filimada. “Weligey ma aan ahayn arday taariikh wanaagsan si gaar ah u yaqaan,” ayay sharraxday, “laakiin markaa waxaan qaatay koorso taariikhda farshaxanka ah oo jacayl ayaa igu dhacay. Waxaa jiray sawiro! Marka runti taasi waxay ahayd sidaan ku ogaaday inaan ahaa arday barta aragga. Si dhakhso leh ugu soco mid ka mid ah shaqooyinkeygii ugu horreeyay ee kaaliye soo-saar ah a Hollywood filim, baarista liis dheer oo muuqaallo muuqdo ah - oo ping ah tartamada pong ee Shiinaha, mudaaharaadyada dagaallada Vietnam-ka ee Washington DC, nooca kabaha orodka ah ee laga sameeyay 1970s. Filimkaas yar wuxuu noqday filimka guuleysta ee 'Oscar' Forrest Gump. Markii aan arkay cilmi-baadhistayda iyo, dabcan, dad badan oo kale - oo nolosha shaashadda ka soo muuqday waxay ahayd khibrad sixir ah, iyo isbeddel ku yimid xirfadayda. ”
Waxay ahayd inta lagu gudajiray muddadan xirfaddeeda inay DeLouise aad u daneyneyso sameynta aflaamteeda madaxbannaan. Waxaan ka shaqeynayay waaxda goobta filimka Oliver Stone JFK. Waxay ka maqnaayeen sawir muhiim ah oo Madaxweyne Kennedy oo ah muuqaalka goobta. Markii aan ka shaqeeyay mashaariicdii dukumiintiyada kala duwan, waxaan aqaanay saxda halka aan ka heli karo oo aan ka sameyn karo nuqul Diiwanada Qaranka. Oliver ayaa markaa ii shaqaaleysiisay inaan ka shaqeeyo kaaliye cilmi baaris qeybta farshaxanka filimkiisa soo socda, Nixon. Naqshadeeyaha soo-saare Victor Kempster wuxuu ahaa dhego-dheere si faahfaahsan oo wax badan ayaan isaga ka bartay. Laakiin, inta lagu gudajiro shaqadaas iyo kuwa kale oo badan Hollywood filimada, Waxaan xaqiiqsaday in sheekooyinka 'dadka dhabta ah' ee aan kashifnay ay ahaayeen kuwa runtii aan aad uga helay. Qisada sheekada lama huraanka ah waa isku mid. Laakiin aniga oo ah agaasime qaab doc ah, waxaan u arkaa sheekooyinka dadka dhabta ahi inay noqon karaan kuwo ku kalifaya sida sheekooyinka khiyaaliga ah. ”
Waxaan u sheegay DeLouise in, sidii qof waligiis TV qabatimay, waxaan u arkaa inay aad ugu badan tahay maalmahan inaan arko haweenka loo tirinayo inay yihiin qoraayo iyo agaasimayaal dhacdooyin taxane TV caan ah, oo ku raaxeysanaya warshad raggu ku xoog badnaayeen tobanaan sano, iyo ka codsaday inay faallo ka bixiso isbeddelkan. Qaar badan oo ka mid ah soo saareyaasha iyo maamuleyaasha dhibcaha aad arkeysaa waa haween jilaayaal ah oo awood u leh inay maalgeliyaan oo ay abuuraan sheekooyinka ay doonayaan inay ka soo muuqdaan. Tusaale ahaan, Kirsten Dunst bandhigeeda cusub ee cajiibka ah Sida Loogu Noqo God God Central Florida loogu talagalay Showtime, ama Nicole Kidman iyo Reese Witherspoon oo wadajira si loo abuuro Liisyo yar yar loogu talagalay HBO. Laakiin haweeney kasta oo dhererkeedu awood u leeyahay inay gasho noocyada mashaariicdaas, waxaa jira kumanaan kale oo leh aflaam waaweyn iyo fikrado ay isku dayayaan inay ku sameeyaan miisaaniyad kabo ah. In kasta oo ay jiraan dadaalo muhiim ah sida Share the Screen at Sundance iyo Meryl Streep's The Writer's Lab, haddana waxaa jira dumar aad u tiro yar oo abuuraya sheekooyin lagu maalgeliyo. Ha i bilaabin marka ay timaado haweenka kaamirada gadaal ka ah sida DPs, qeybta codka, gaffer, xajis, DIT, injineero, iyo halabuur. Lambaradaasi waxay ku jiraan boqolleyda hal lambar. Waxaad faahfaahinta oo dhan ka heli kartaa Xarunta Daraasaadka Haweenka ee San Diego ee Telefishanka iyo Filimka. Haa haa, waxaan haynaa wado dheer oo aan aadno. Warka fiicani waxa weeye in kaamerooyin cusub oo la awoodi karo iyo NLEs ay suurtogal ka dhigayaan in qof kasta oo doonaya inuu sheeko sheego uu qabsado qalabka oo tago oo sameeyo. ”
Ka hadalka dumarka ku jira filimada warshadaha ayaa si macquul ah ugu hogaamiyay barnaamijka DeLouise ee barnaamijka GalsNGear. Waan abuuray #GALSNGEAR sida dhacdo soo-qaadis ah oo lagu caawinayo in la hubiyo in haweenku sifiican loogu matalay inay yihiin kuwa ku hadla shirarka xirfadeed iyo dhacdooyinka warshadaha. Kuwani waa qaar ka mid ah fursadaha ugu muhiimsan ee xiriirinta iyo tababarka ee warshadaha, iyo dadka qof kasta oo jinsiyadiisu u baahan tahay ay dareemaan soo dhaweyn iyo qayb ka mid ah. Waxaan sii waday aragtida dhammaan ragga, ama waxaan isu arkaa naagta kaliya ee golaha, haddana waxaan ogahay dumar badan oo khabiir ku ah wax soo saarkooda. Markaa waxaan la xiriiray qofkasta oo aan aqaan, waxaanan ka codsaday inay la xiriiraan xiriirkooda, waxaan hadda leenahay shabakad haween agaasimeyaal, tifaftireyaal, DPs, maareeyayaal xarunta, injineerro dhawaqa, makiinado isku-darka, saamaynta gaar ah Fannaaniinta, waad magacawday, kuwa diyaar u ah inay ku hadlaan oo la wadaagaan khibradooda. Waxaan bilownay shan sano ka hor NAB Show waxayna ahayd guul weyn. Waxaan marti gelinaa goleyaasha, munaasabadaha isku xirka, iyo tusmada qalabka, waxaana taageero ka helnay shirkadaha waaweyn ee warshadaha sida Blackmagic Design, Adobe, Broadcast Beat, Fox Fury Lighting, Digital Anarchy iyo Dell si aan uxuso inbadan. Waxaan sidoo kale taageero aad u weyn ka helnay wada-hawlgalayaashayada ka tirsan Haweenka ku jira Filimka & Fiidiyowga DC, oo ah cutubkayga maxalliga ah. Hadafkeenu waa in aan hubinno in qof kasta oo leh shir xirfadeed ama dhacdo ay leeyihiin haween badan oo ka soo qayb galaya, iyo dumar badan oo ka mid ah kuwa waxsoosaarka sarre leh oo ku jira boosaska sare ee hadalka. ”
DeLouise waxay qaban doontaa laba bandhig, "Dhisida Ganacsigaaga Madaxa Banaan ilaa Heerkaga xiga" iyo "Qoraalka Muuqaalka," sanadkaan NAB Show New York. Waxaan afhayeen ka ahaa Post | Production World at NAB Show waayo, oh, malaha waa toban sano hadda. NAB Show waa dhacdo warshad hordhac ah, mana seegi doono. Kaliya maahan fursad isku xir. Waa fursad weyn oo wax looga barto dhammaan qaybaha kala duwan ee warshadeenna. Waan ka hadlayaa NAB Show New York bisha Oktoobar, waxaanan rajaynayaa inaan raadsado qalabyo iyo qulqulka cusub ee soo ifbaxay xitaa tan iyo NAB Show gugii hore. Waxaan sidoo kale martigelin doonaa midkeenna #GALSNGEAR guddiyada halkaas.
Aniga oo ah qof iska leh seddex shirkadood oo warbaahinteyda ah, waan ogahay inaysan sahlaneyn inaad meheradada iska maamusho. Waxaan la wadaagi doonaa khibradeyda seddex arrimood oo muhiim ah: dhisida sumaddaada, maareynta lacagtaada, iyo dib u milicsiga mustaqbalkaaga. Kuwani waa saddexda meelood ee shaqaaluhu ay inta badan u baahdaan taageero, maxaa yeelay waxay aad ugu mashquulsan yihiin u shaqeynta macaamiishooda. Marka waxay noqon doontaa fursad ay waqti ku qaataan naftooda. Haddii aad ganacsi ku jirtay sannado badan oo aad dareento inaad ku dheggan tahay isku dayidda inaad u gudubto heerka ku xiga, ama haddaad bilawdo ganacsi madax-bannaan, aqoon-isweydaarsigaygu wuxuu ku siin doonaa waxyaabo aad uga faa'iideysan karto ganacsigaaga. ”
Wareysiga ayaa lagu soo gabagabeeyay iyadoo DeLouise ay ii sheegayso qorshayaasheeda mustaqbalka. “Waan ku faraxsanahay inaan soo bandhigo khibrad aan ku dheehnayn oo ku saabsan dabeecad taariikhi ah oo loogu talagalay in lagu rakibo matxafka, iyo lagu soo bandhigo safar. Mashruucaas wuxuu ku guursadaa jacaylka aan u qabo warbaahinta taariikhda ku duugan aniga oo aan u jeclahay sheeko wanaagga. Waxaan sidoo kale dhammeeyay qorista buug cusub oo loogu talagalay Saxaafadda Focal, Codka iyo Sheekada ee Filimka 'Nonfiction Filimka' iyo Video, oo aan la socdo saaxiibkay iyo fiicni codka Cheryl Ottenritter. Taasi waxay horeyba ugu jirtay iibinta kahor waxayna soo bixi doontaa bisha soo socota. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan toogtay koorso cusub oo ah "LinkedIn Learning Course" oo ku saabsan "Running Your Business Production" oo dhowaan soo bixi doonta. Waana ku faraxsanahay wax soosaarka aan la shaqeynayo macmiil shirkado caalami ah oo soo saaraya wax soo saar weyn oo cusub. Markaa dhicitaanku wuxuu u furmay qalab sare, waana sida aan u jeclahay! ”
#GALSNGEAR 2015 2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2019 NAB Show New York Amy DeLouise hoos bitrate Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC Filimka JFK NAB 2015 NAB 2016 NAB16 nabshow Filimka Nixon dhimista buuqa Oliver Stone UHD / 4K / HD viarte Warsaw 2019-10-15
Previous: Nidaamka Smart-Way ee FSR wuxuu Joojiyaa Bandhigga inta lagu jiro NECA 2019
Next: Beddel Media Unveils Qiime-Kordhin dhakhsa leh-Suuqa Suuqa OTT Platform MediaHQ Lite